यस्तो छ कोरोनाविरुद्ध दक्षिण कोरियाको सफलता रहस्य ! – HostKhabar ::
यस्तो छ कोरोनाविरुद्ध दक्षिण कोरियाको सफलता रहस्य !
एजेन्सी : केही समयअघि दक्षिण कोरिया पनि कोरोना भाइरसको प्रभावमा नराम्ररी जकडिएको थियो । त्यहाँ दैनिक ५ सय भन्दा बढीमा संक्रमण फैलिएको थियो ।
फेब्रुअरीको अन्तिमसम्म दक्षिण कोरियामा कोरोना संक्रमितको संख्या चीनपछि दोस्रो स्थानमा थियो । २९ फेब्रुअरीमा २४ घण्टा भित्र संक्रमितको संख्या ९ सय ९ पुगेको थियो ।
तर केही दिनपछि यसको फैलावटमा कमी आउन थाल्यो । अहिले कोरोनाको संक्रमण फैलिएका मुलुकहरुमध्ये अन्तिम दशौं स्थानमा दक्षिण कोरिया आईपुगेको छ । जसअनुसार संक्रमितको संख्या दोहोरो अंकमा मात्रै सिमित बनेको छ ।
प्रधानमन्त्री चुंगका अनुसार दक्षिण कोरियामा अहिले संकटकालको अवस्था छैन । उनले भने, ‘नयाँ विरामीहरु आउने क्रममा धेरै कमी आईसक्यो । अब हामी कोरोनालाई पूर्ण रुपमा नियन्त्रण गर्न सक्ने अवस्थामा छौं ।’ चुंगका अनुसार दक्षिण कोरियाले लकडाउनका अलावा अन्य विकल्पका बारेमा सोच्यो र पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन पनि गर्यो ।
प्रधानमन्त्री चुंगले भने, ‘हामीले काम गर्ने गतिलाई तिब्र बनायौं । पारदर्शिता अपनायौं । नयाँ उपायहरुको खोजी, प्रयोग र आविष्कारसंगै जनसहभागितालाई पुरापुर महत्व दियौं ।’ सुरुवाती समयमा दक्षिण कोरियाले दिनमा १० हजार जनाको मात्रै कोरोना परीक्षण गर्न सक्थ्यो । तर अहिले २० हजार जनाको परीक्षण गर्न समर्थ भएको छ ।
अहिलेसम्म ३ लाख ७६ हजार ९ सय ६१ जनाको कारोना परीक्षण भैसकेको छ । दिनमा २ पटक पत्रकार सम्मेलन गरि सत्य तथ्य सूचना प्रवाहको गतिलाई तिब्र पारिएको छ । ‘हामीले जनतामा सत्य र पर्याप्त सूचना पुर्याई सचेतना फैलाउने काममा कुनै कसर बाँकी राखेनौं ।’
जनसहभागित बारे प्रधानमन्त्री चुंगले बताए, ‘ यसमा कुनै ठूलो कुरै छैन, हामीले सर्वसाधारणलाई केवल सामाजिक दुरी बनाउन, एकान्तबास बस्न, पटक पटक हात धुन र मास्क लगाउन अनुरोध गरेका थियौं । जनताले साथ दिए, त्यसैले अहिले हामी सफलताको नजिक छौं ।’
यसैको परिणामस्वरुप दक्षिण कोरिया लकडाउन नगरिकन कोरोनामाथीको विजय नजिक पुगेको छ । यहाँको मेडिकल साइन्समा भएको प्रगतिलाई विश्वभरमै तारिफ गरिन्छ । अहिले क्यानडा, साउदी अरब, स्पेन र अमेरिकाले समेत कोरोना नियन्त्रणमा दक्षिण कोरियाले पाएको सफलता बारे राष्ट्रपति मून जाय इनसंग छलफल गरिरहेका समाचारहरु आईरहेका छन ।